Irreecha irratti Woyyaaneen Oromoo dhibba heddu ajjeefte; Arsadii irratti duguuggii sanyii geggeesite - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Irreecha irratti Woyyaaneen Oromoo dhibba heddu ajjeefte; Arsadii irratti duguuggii sanyii geggeesite
Irreecha irratti Woyyaaneen Oromoo dhibba heddu ajjeefte; Arsadii irratti duguuggii sanyii geggeesite
Miidiyaaleen addunyaa woraanni Oromoo Arsaditti wolgaye irratti banamuu fi reeffi daandii irratti gatamuu ragaa bayaniiru
Humni Woyyaaneen bobbaafte guyyaa har’aa iddoo irreeffannaa, Hora Arsadii, gara dirree woraana fi duguuggii sanyiitti geeddare. Dhukaasa Agaziin lafaa fi qilleensa irraa ummata ayyaana Irreechaaf Oromiyaa hunda irraa Bishooftutti argame irratti baneen hanga ammaatti namoonni 400 oli ajjeefamuu fi dhibbi heddu ammoo madoo taasifamuun beekameera. Ijoollee fi haawwotii irra hubaatiiin cimaan gayeera. Guyyaa har’aa Arsadiin reeffaan guutamte, magaalaan Bishooftuuu dhiiga dibatte, akka namoonni gocha badii Oromoo irratti raawwatame kana ijaan argan jedhanitti.
Hospitaalonni naannoo Bishooftuu fi Finfinneetti argaman reeffaa fi namoota madaayaniin dhippachuun hubatameera. Reeffi namoota wareegamanii hedduun isaa ammas dirree irra kan jiru.
Gochi duguuggi sanyii Oromoo irratti guyyaa har’aa rawwatame isa addaati. Du’aaf kan Oromoo saaxile Irreecha ayyaaneffachuuf Bishooftutti argamuu fi akkasumas mirgaa fi bilisummaa barbaanna jedhanii dubbachuudha.
Woyyaaneen ajjeechaa fi gocha gara jabeennaa kana fakkaatu Irreecha bara kanaa irratti kan raawwatteef Oromoo jilbiiffachiisuu fi du’a sodaatee sabni kuni Irreechaa irraa akka duubatti jedhuuf. Dhugaan mootummaan kuni hubachuu dadhabde garuu garajabeenni bifa kamuu Oromoo jabeessuu fi murannoo isaa cimsuun alatti kan harka hin laachifnee fi duubatti isa hin deebifne ta’uu isaati. Ajjeechaan Oromoo ni jajjabeessa, xiiqii qabsiisa. Dhiigni dhangala’u bilisumatti isa geessa.
Previous articleDhaabbanni Risk Advisory jedhamu fundurri mootummaa Woyyaanee dukkanaayaadha jedha
Next articleAjjeechaan Bishooftuu Oromoo dallansiisee ummanni daanditti bayee qabeenya Woyyaanee akka mancaasu taasise